Zava-bavaka 30 ho an'ny finoana izay mamindra tendrombohitra | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Zava-bavaka 30 ho an'ny finoana izay mamindra tendrombohitra
Zava-bavaka 30 ho an'ny finoana izay mamindra tendrombohitra
finoana dia sandam-bola manerantany izay ahafahanao mandray ny lovanao amin'ny fiainana. Raha tsy misy finoana dia tsy azo heverina ny hahomby amin'ny fiainana, ny lehilahy sy ny lehilahy lehibe rehetra dia lehilahy sy vehivavy manam-pinoana. Ilay Andriamanitrao dia miasa ao amin'ny sehatry ny finoana, ny Hebreo 11: 6 dia milaza amintsika fa raha tsy manam-pinoana dia tsy azontsika atao ny mampifaly an'Andriamanitra, satria miditra ao amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia tsy maintsy mino azy ianao. Androany isika dia handray anjara amin'ny vavaka fangatahana finoana manetsika tendrombohitra. Ny sakana rehetra mijoro eo anoloanao dia haringana ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Betsaka ireo famaritana finoana ankehitriny, fa ho an'ny tanjon'ity lahatsoratra ity, dia hifantoka amin'ny finoana an'Andriamanitra isika. Misy karazana finoana roa, dia ny hoe: Finoana an'Andriamanitra sy ny finoana ao amin'ny tenanao. Mila ny hahomby ianao, mila miankina amin'Andriamanitra mba hahomby ary tsy maintsy mino koa ianao fa afaka mahomby. Fa anio dia hifantoka amin'ny finoana an'Andriamanitra, na ilay karazana finoana Andriamanitra. Ny finoana dia miankina tanteraka amin Andriamanitra. Ny fiankinan-doha tanteraka amin'Andriamanitra dia midika fotsiny fa efa natoky an'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao, dia midika izany fa na eo aza ny faharatsiana toa tsy miseho amin'izao fotoana izao, dia mbola mijanona miaraka amin'i Jesôsy ianao. Ny karazana finoana mandrindra tendrombohitra dia ny finoana tanteraka. Io finoana io izay tsy misy fisalasalana, finoana io fa tsy hanary an’Andriamanitra mihitsy. Ny finoana mandroso tendrombohitra no finoana tsy mahita azo atao. Milaza amintsika ny Marka 9:23 fa raha afaka mino isika, ny zavatra rehetra dia azon'ny mino. Raha mbola eo ny finoantsika dia tsy hisy zavatra tsy ho azontsika atao. Ity vavaka ity dia manondro finoana izay mamindra tendrombohitra ka hanala ny tendrombohitra rehetra fetra amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ahoana no ifandraisany an'io finoana io
Afaka mifandray amin'i finoana amin'ny alàlan'ny vavaka ianao. Ny vavaka no lakile amin'ny zava-tsoa rehetra amin'ny fiainana. Raha maniry ny hiasa amin'ny finoana maizina ianao dia tsy maintsy mpivavaka mivavaka, dia tsy maintsy omena vavaka ianao. Ity vavaka ity dia manondro ny finoana hanampy anao amin'ny fanahin'ny finoana izay hanetsika ny tendrombohitra demonia rehetra amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy haiko ny zava-tsarotra atrehanao dieny izao, rehefa miatrika izany ianao dia mahita ireo tendrombohitra rehetra mitsangatsangana toy ny ondrilahy amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy am-pinoana izao vavaka izao ary amindrao ny tendrombohitrao
1. Ry Fanahy Masina, aza avela ho lao ny tranoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Tompo ô, havaozy ny teniko amin'ny teninao.
3. Tompo ô, omeo hery aho hampahamenatra ny fahavaloko.
4. Ny vatam-panahy rehetra namboariko ho an'ny tenako, dia ho fongotry ny afon'Andriamanitra, amin'ny maha Jesosy azy.
5. Ry Jesosy Tompo ô, fidio aho hanao fahagagana isan'andro amin'ny fiainako.
6. Tompo ô, ambarao amin'ny zava-manjo ny teninao aho.
7. Tompo ô, vonjeo amin'ny vavan'ny liona aho.
8. Tompo ô, mamelà ny heloko fa mitondra olana eo amin'ny fiainako aho.
9. Tompo ô, omeo hery aho honina ao amin'ny sambofiaran'i Noa.
10. Tompo ô, avelao aho hambinina.
11. Tompo ô, esory amin'ny fiainako izay zavatra mety hahatonga ahy tsy hahatsiaro ny fampakarana.
12. Avelao ny ran'i Jesosy sy ny afon'ny Fanahy Masina, diovy amin'ny fiainako, ny satroka rehetra dia hitondra ahy any amin'ny helo, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Tompo ô, avelao hitoetra tsy manana ahiahy aho.
14. Mandoko ny sakafo rehetra ateraky ny ota amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Ry Tompo, ambarao ny fiainako sy ny afo ankehitriny amin'ny fiainako anio.
16. Nofoako ny lalan'ny fanoherana mahery vaika tamin'ny ota sy ny tsy marina, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Ry Jesosy Tompo, mivavaha ho ahy mba tsy ho voahitsakitsaka toy ny kotom-bary alefan'ny devoly aho.
18. Tompo ô, ampio aho avy any ambony ary manala baraka izay mampahory ahy.
19. Mifindra kely indrindra hatrany amin'ny ambony indrindra aho ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Mandreraka ny fanoherana ny satana amin'ny fandrosoako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
21. Hatao henatra ny anjarako rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Izaho dia mandrava ny asan'ny mpandringana amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Ny hazo ratsy rehetra maniry ao amin'ny fanorenako, hosoratana amin'ny anaran'i Jesosy izao.
24. Tapaka ny atody rehetra izay napetraky ny menarana ao amin'ny departemanta misy ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ny hery bibilava sy maingoka rehetra manohitra ny fiainako, dia manala baraka, amin'ny Jesosy toa an'i Jesosy.
26. Ry Tompo, aoka ny menarana rehetra sy ny maingoka nanendrena ahy hanomboka hiady amin'ny tenany, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Ny bibilava tsirairay nandefa hamongotra ahy, miverina amin'ny mpandefa anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Ny fanahy moana rehetra sy ny marenina rehetra, manomboka manary ny fiainanao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy aho.
29. Ny tanjako ara-panahy nohosihin'ny menarana, mandray ny fifandraisan'Andriamanitra amin'Andriamanitra ary haverina amin'ny laoniny, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Ry menarana, fadio ny heriko ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy
Previous lahatsoratraZava-bavaka 100 ho an'ny vehivavy
Next lahatsoratra3Am Ady Vavaka momba ny ady
Okechukwu Augustine chigozie 10 Mey 2020 Amin'ny 11:21 hariva
Ny fangatahako am-bavaka izao maraina izao dia ny hanafahan'Andriamanitra ahy amin'ny zavatra rehetra lalovako ny toe-javatra tsy ampifalifaly ahy aho maniry fanovana eo amin'ny fiainako tiako Andriamanitra hanome ahy hery hitsaoka azy ny hery hampianarana ny tenin 'Andriamanitra hery hanovana zavatra hanova ny fiainako Tiako Andriamanitra hanova ny toe-javatra misy ahy amin'ny toe-javatra tsara ho an'ny vola sy ny zavatra rehetra ho tonga amin'ny Fiainako alohan'ny faran'ity volana ity dia mila fanovana eo amin'ny fiainako aho avelao ny fanahin'Andriamanitra tariho ny mpanampy ahy hametraka ahy any amin'ny Famindram-poko Masina mba hamonjy ahy amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy amena
Lisa 20 septambra 2020 amin'ny 4:10 hariva
Amen. Miombon-kevitra aminao aho mba hamaliana ity vavaka ity.
Leo March 11, 2021 Ao amin'ny 4: 36 am
30 Vavaka amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana mavitrika
Fanafahana vavaka amin'ny Fanahy
Famakiana Baiboly isan'andro Androany 25 Oktobra 2018.
FIVAVAKANA HO AN'NY MPIASA ESWATINI